Caymiska | Swedbank
Aidga iyo wayaabaha aad leedahayba waxaad caymiskayaga ka heleysaan ilaalo wanaagsan. Hadii aad rabtid in aad wax dheraad ah ka ogaatid caymiskayaga, fadlan la xiriir faraca xafiiskayaga.
Sababta loogu qadaayo qoyska caymis dhammaystiran waa in aad ilaaliso gurigaaga iyo hantidaada. Caymis dhammaystiran ee qoyska sidoo kale waxaa ku jira masuuliyada caymiska, ilaalinta sharciyeed, ilaalintaweerarka iyo waxyeelo gaysashada iy caymiska safarka
Waxaanu bixinaa caymiska qoyska o wata daboolid kharash oo dhammaystiran iyaddoo lahayn ku daritaan badan oo wadata sheegashooyin debecsan oo fudud ee habka dehinta. Malahan lacag dheeri ah oo aad bixinaysid haddii aad dooratid inaad ku bixisid bil ahaan.
Baabuur noocaad doonto ka wado, waxaan kuu haynaa caymis kugu haboon. Waxaan caymis u haynaa gawaarida yaryar, gawaarida waaweyn, RVs, tareelayaasha iyo mootooyinka barafka. Si lamid ah caymiska guryaha, waxaad helaysaa ilaalin dhameystiran iyadoon lagaa qaadin dulsaar dheeraad ah, nidaamka sheegashadana/codsashadana waa mid toosan oo dabacsan.
Waxaan sidoo kale kuu haynaa caymis idin ilaalinaya adiga iyo qoyskaaga haddii ay dhacdo jirro, naafonimo ama geeri. Swedbank wuxuu ku siinayaa adeegyada caymiska nolosha, caymiska caafimaadka, caymiska naafonimada joogtada ah, ceymiska caafimaadka ee la dheereeyey, iyo ceymiska carruurta.
Qiimo dhimista Caymiska
Haddii aad doorato inaad caymis geliso gurigaaga iyo baabuurkaaga, waxaad heli doontaa illaa 15 boqolkiiba oo qiimo dhimis ku ah dhammaan caymiskaaga. Fursadaan ma ahan mid ku-xadidan wakhti, waxayna ansax noqoneysaa marka la saxeexo heshiis sannadle ah.
Haddii uu dhaco shil la xiriiro caymiska
Fadlan soo wac:
+46(0)771-23 33 33
Maclumaad dheraad ah oo la xiriiro waxyaabaha aan bixinno
Fadlan la xiriir telefoonkeena bangiga
+ 46 (0)771-22 11 22
ama booqo xafiiskeena faraca maxaliga ah.